Faritra Atsimo Atsinanana: 14 % sisa ny vokatra kafe, tsy misy intsony ny fanondranana | NewsMada
Faritra Atsimo Atsinanana: 14 % sisa ny vokatra kafe, tsy misy intsony ny fanondranana
Par Taratra sur 18/09/2018
Manana ny mampiavaka azy ny faritra Atsimo Atsinanana amin’ireo vokatra fanondrana : ny kafe,ny jirofo,ny poavra. Raha ny kafe, ohatra, tsy mitsahatra mihen-danja ny vokatra ary efa hatry ny ela tsy misy intsony ny fanondranana mankany ivelany avy amin’iny faritra iny.
Manana ny fari-piadidiany ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana any amin’ny faritra Atsimo Atsinanana, manao ezaka manatsara ireo vokatra any an-toerana, toy ny jirofo, ny poavra, ary ny kafe. Momba ny kafe manokana, 45.000 t ny vokatra manerana ny Nosy ka ny avy any Atsimo Atsinanana voalohany mpamokatra izany tany aloha, nanome 45 %. Amin’izao fotoana izao anefa, tsy misy afa-tsy 14 % sisa ny avy amin’io faritra io. Raha mbola nahita 6.297 t, ny taona 2016, 1.715 t izany, ny taona 2017.
Miha antitra ny fototra kafe ka betsaka ny mpamboly tsy miraharaha intsony, mivadika any amin’ny zavatra hafa, toy ny voly fary hanaovana toaka gasy mampidi-bola haingana. Lany amin’ny tsena eto an-toerana avokoa sady tsara vidy izay vokatra kely sisa, koa tsy mampaninona ireo mpamboly ireo na tsy afaka manondrana intsony.
Ankoatra ny kalitao tsy manara-penitra ho an’ny tsena ivelany, ny seranan-tsambo ao Manakara mikatona hatry ny ela, ny lalana mampifandray ireo kaominina ratsy, ny tsy fahampian’ny fitaovana, ny tsy fisian’ny trano fitahirizam-bokatra fanamainana ny vokatra, tsy misy ny orinasa mpanodina ny vokatra, ny tsena tsy mirindra. Sakana avokoa ireo ho an’ny mpamboly sy ny mpanangom-bokatra.
Ezahina ny mamelona ny lalam-pihariana
Manoloana izany, mitondra vahaolana ny fari-piadidian’ny minisitera any an-toerana, manentana ireo tantsaha sy mampiofana azy ireo amin’ny lafiny teknika. Misy ny mazoto mamelona ity lalam-pihariana ity sy vonona ny hanitatra izany. Afaka manome kalitao kafe tsara (karazana Robusta) ny faritra Atsimo Atsinanana noho ny toe-tany sy ny toetr’andro any an-toerana. Mbola malalaka rahateo ny tany ary ahitana karazana mpamboly mitrandraka velaran-tany goavana hatramin’ny 262 ha (95 ha efa voavoly).
Fidiram-bola ho an’ny tantsaha sy ny kaominina ny kafe, koa ezaka ataon’ny fari-piadidian’ny minisitera any Atsimo Atsinanana, ankehitriny, ny mametraka rafitra ara-dalàna ho an’io fihariana io; Manamafy amin’ny tantsaha ny fifehezana teknika sy ny fampivondronana azy ireo ao anatin’ny fikambanana na kaoperativa hahitana famatsiam-bola sy fampitaovana.